DVD-Ripper | ဆိုင်မွန်စာကြည့်ဆိုဒ်
Showing posts with label DVD-Ripper. Show all posts
Movie DVD Ripper Ultimate 9.8.3 + Final + Key
Movie DVD တွေကို AVI, MPEG, WMV, MP4, FLV, H.264 / MPEG-4, MP3, WMA, AAC,
WAV, စသည် တို့ကို Convert & Formats လုပ်ပေးနိုင်တဲ့ အပြင် DVD-ROM drive extract audio
from DVD နှင့် Capture and save images in BMP, JPG, PNG or GIF တို့ကိုလည်း Formats
Supports လုပ်ပေးနိုင်တဲ့ ဆော့ဝဲလ်ကောင်းလေးပါ။
Mobile Phone တွေအတွက်လည်း Formats ပေါင်းများစွားကိုလည်း လုပ်ဆောင်ပေးနိုင်ပါတယ်။
အမြဲတမ်း Full ဖြစ်စေဖို့ အတွက် ဒေါင်းလုပ် ဖိုင်ထဲမှာ Key လေးကို ထည့်သွင်းပေးထားပါတယ်။
ကဏ္ဍ DVD-Ripper, Movie Manager
Leawo Blu-ray Ripper 7.1.0.8 + Crack (51.51MB)
Blu-ray နှင့် DVD movies တွေကိုအကောင်း video and audio conversion လုပ်ပေးနိုင်တဲ့ ဆော့စ်ဝဲလ်
ကောင်းလေးတစ်ခုပါ။ သူ့မှာပါဝင်တဲ့ 3D effects တွေကိုထည့်သွင်းပေးနိုင်ပြီး formats ပေါင်း 100 ကျော်
လည်းရှိပါသေးတယ်။ 2D Blu-ray, DVD ကနေ 3D video အဖြစ်လည်းတည်းဖြတ်နိုင်ပြီး phone, tablet,
အတွက်လည်း convert လုပ်ပေးနိုင်ပါတယ်။ video editing features တွေပါဝင်ပြီး subtitles and audio tracks တွေနဲ့လည်းထည့်သွင်းအသုံးပြု နိုင်ပါတယ်။ Full ဖြစ်စေဖို့အတွက် Crack ဖိုင်လေးကိုထည့်သွင်း
မျှဝေသူ Te Tee မှာ Monday, November 17, 2014 1 comment:
ကဏ္ဍ DVD-Ripper, DVD-Software, Video-software
ZC Blu-ray DVD Ripper 4.0.1.1740 Final + Crack
blu-ray DVD movie တွေကို video and audio တွေ အဖြစ် conversion ပြုလုပ်ပေးမယ့် ဆော့စ်ဝဲကောင်း
လေးတစ်ခုပါ။ convert ပြုလုပ်ပေးနိုင်တဲ့ Tools တွေ ကတော့ movie (m2ts, mts) to video file (AVI,
MPEG, WMV, DivX, MP4, H.264/AVC, MOV, XviD, 3GP, ASF, H.263, FLV, SWF ) စသည့် အပြင်
(MP3, WMA, AAC, WAV, M4A, RA, AC3, MP2, AMR, SUN AU) music file တွေ ကိုလည်း ပြုလုပ်နိုင်
သူ့မှာနောက်ထပ် Support လုပ်ပေးနိုင် တာတွေလည်း အများကြီး ရှိပါသေးတယ်။ အမြဲတမ်း Full ဖြစ်စေ
ဖို့အတွက် ဒေါင်းလုပ်ဖိုင်ထဲ Crack ဖိုင်လေးကို ထည့်သွင်းပေး ထားပါတယ်။
From : Internet for Myanmar by ရန်ကုန်သား
ကဏ္ဍ DVD-Ripper, Video-software
Xilisoft DVD Ripper Platinum 7.8.3 Build 20140904 Multilanguage Full
Home Page : www.xilisoft.com
uRex DVD Ripper Platinum 7.0 Final + Key
ဒီကောင်လေး ကတော့ DVD movies တွေကို Rip-Convert လုပ်တဲ့ နေရာမှာ အမြန်ဆုံးနဲ့ အလွယ်ကူဆုံး
ဖြစ်တဲ့ DVD ripping software ပဲဖြစ်ပါတယ်။ trimming, cropping, adjusting brightness, contrast
နှင့်အခြားသော effects တွေကိုလည်း တည်းဖြတ်နိုင်ပါတယ်။ titles/chapters တွေ ထည့်သွင်းနိုင်သည့်
အပြင် မလိုအပ်တဲ့ အမဲရောင်လိုင်းတွေကိုလည်း ဖျက်ထုတ်နိုင်ပါတယ်။
YouTube, Vimeo, Facebook အစရှိ သည့်တို့တွင်လည်းတိုက်ရိုက် upload ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။
full ဖြစ်စေဖို့အတွက် serial key ကိုထည့်သွင်း ပေးထားပါတယ်။
- Major upgrade for intuitive interface, more friendly and easier to use
- Improved DVD Ripping performance, Disney, Sony Pictures, 20th Century Fox, Universal Picture, Warner Bros Pictures, MGM, DreamWorks SKG, etc protected DVDs supported
- 110+ output formats added
- Smart fit function
- Convert CBR to VBR, VBR to CBR
- Speed up H.264 conversion
- Over 50 minor bugs fixed
မျှဝေသူ Te Tee မှာ Thursday, May 08, 2014 No comments:
4Videosoft Blu-ray Ripper 5.2.50 Multilanguage | 30.07 MB
Download 4Videosoft Blu-ray Ripper 5.2.50 Multilanguage ( 30.07 MB )
DVDFab 9.0.5.5 Full Version Crack / Patch / Serial Key
download latest version by Asif Naveed
မျှဝေသူ Unknown မှာ Sunday, July 28, 2013 No comments:
DVD Ripper software တစ်ခုဖြစ်ပြီး Protect လုပ်ထားတဲ့ DVD ကိုတောင်ကူးယူပေးနိုင်ပါတယ်။
DVD အခွေကနေ မိမိရဲ့ media device အမျိုးမျိုးဖြစ်စေ ၊ မိမိစိတ်ကြိုက် Format မျိုးစုံဖြစ်စေ
format မြောက်မြားစွာ ကူးပြောင်းနိုင်ပါတယ်။
DVD to AVI , MP4 , MPEG , WMV , MOV , 3GP , FLV စတဲ့ general Format တွေအပြင်
Apple Device မျိုးစုံ , Android မျိုးစုံ , Microsoft , PSP , Xobx , PS3 , PC … etc စသည်တို့
အတွက် Format တော်တော်များများကို ကူးပြောင်းနိုင်ပါတယ် ။
subtitle ကိုမိမိနှစ်သက်ရာ ( မြန်မာ ) ရွေးချယ်ကာ အလွယ်တကူကူးပြောင်းနိုင်ပါတယ် ။
Hotfile zippyshare limelinx
from မြန်မာ Mobile Application စတိုး by Kglay Ko Phyo
မျှဝေသူ Unknown မှာ Friday, April 12, 2013
WinX DVD Ripper Platinum 7.0.0 With Serial
မျှဝေသူ Unknown မှာ Monday, January 07, 2013 No comments:
3herosoft DVD Ripper Platinum - convert between popular video files and rip DVD to popular video and audio formats such as WMV, 3GP, AVI, MPEG4, RM, DivX, MOV, XviD, FLV, SWF, AC3, M4A, MP3, WMA , WAV, AAC, etc. with good speed and quality.
Joboshare DVD Ripper Platinum v3.2.1.1021 Incl. Keygen
Joboshare DVD Ripper Platinum is the best DVD ripping software, which can rip and convert movie DVD to AVI, MPEG, WMV, FLV, MKV, ASF, DivX, MP4, VOB, SWF, H.264/MPEG-4 AVC, RM, MOV, XviD, 3GP, MP3, AMR, WMA, WAV, RA, M4A, AAC, AC3, OGG, etc. video and audio formats with excellent quality and fast speed! Read more »
မျှဝေသူ Unknown မှာ Monday, November 07, 2011 No comments: